Obbo Kabiir Huseen Waaqoo eenyu turan? – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooObbo Kabiir Huseen Waaqoo eenyu turan?
Har’a Adaamatti nama tokko gara fuula rabbii geggeessine. Nama Oromo tokko. Nama sirna qabu tokko. Nama gootaa tokko. Nama arjaa. Hayyuu. Nama keenya tokko oonyee geggeessine. Namni sun Kabiir Huseen Waaqoo jedhama. Namni hedduun abbaa qabeenyaa Adama General Hospital jaaree saba boonse ta’uu isaatiin irra caalaa beeka. Garuu seenaan nama kanaa, hojiin isaafi gumaatni ummata keenyaaf godhe hedduu dheetuudha. Ilma qonnaan bulaa kalooytaa sheekkotaa harkaan hodhee qarshii 80 walitti qabatee daladala eegalee as gahe. Sabboonaa bara Maccaa Tuulamaatii hanga gaafa gara fuula waaqaa deemutti qabsoo tana biraa gochaan hin hafin, Kabir Huseen Waaqoo! Seenaan isaa dheetuu. Warri waliin jiraate, hedduu nuuf himuu danda’an. Ani haguma beeku keessaa waa sadeen takka isiniif haa himuu.
Waggaa 18 dura Adaamaatti barataan ture. Lafa amma Boolee jedhaniin tan Adaamaatti amma ganda jabaa taate san, gaafas xaafii qonnaan bulaatu irra jira. Firri kiyya tokko mana achitti jaarachuu eegalee anis san too’adhaaf. Tanuma keessa bakka amma General Hospital jiru kana lafti ijaarsa hopitaalaaf kenname jechaa dhageenye . An yero yeroon bakka tana bira ol dabree mana fira kiyyaa jaaramaa jiru san laalee gadi deebi’a. Ganamaa galgala yeroo ani deddeebi’u kana nama qal’aa tokkotu achumaa waa sisirreessa. Ganamaa galagala, guyyaa mara achuma jira. Yoo kiyyaa waardiyyaa, yoo akkam jabaate hojjachiisaa natti fakkaata ture. Gaafa tokko itti dhiyaadhee gaafadhe. Abbaan qabeenyaa isa ta’uu hubadhe. Na ajaaibe. Namni qaamaan huqqqataa kan hojjataa waliiniifi erga isaan galaniihis hojjatu kun abbaa qabeenyaa hospitaalcha jaaramuu ta’uun na ajaa’ibe. Roorroo lafa sanirratti itti aggaamamaa ture irra aanee fixee waggoota dheeraa booda Ameerikaatti wal agarre. Maalif hospitaala san akkasitti ciniinnatee bira dhaabbatee jaarsiste? Ati dureessaa kubbaaniyyaa ramaddee maaf hin hojjachiifne haga aduu keessa bira dhaabattee awwaara dhugaa turte jedheen gaafadhe. “ Ilma kiyya” jedhe “ ee ani dureessa. Rabbiif galanni haa gayu. Warri akka kiyyatti rabbi qabeenna kenneef gaafa dhibame biyya alaa deemee wal’anama. Fedhu Ameerikaa, fedhu Awuroppaa takkaa Eesiyaa. Kan hanga keenya qabeenya hin qabne hoo horoo dhabaaf osoo fayyuu danda’uu maalif du’a? Kanaafiin jaare. Ammas hanga garaa kiyyaa hin geenye. Ganaa guddifna” naan jedhe.
Yaadannoon lammataa, bara Qabsoo Qeerroo san yeroo diinni ummata keenya fixu san, yeroo kilinakaafi hospitaalli dhuunfaa hedduun madoo teenya fudhachuu sodaatan san, Kabiir Huseen nu cinaa ture. Joollee hiriira irratti rukutamteefi kanneen lola daangaa Mooyyalee hanga Bordoddee madayaa turte, ofitti fuudhee nuuf wal’aanaa ture. Kaffaltii malee. Waanin yaadachu keessaa yeroo bulchiinsi hospitaalichaatuu baasiin humnaa ol nutti ta’e jedhanii mataa maran, Kabiir warra madoo fide san alatti nyaaraan waamee maallaqa ofiii itti kennee hopitaaluma sanitti kan galmee kafalanii akka galchan godha ture. Hospitaala isaattti qofa hin turre. Hospitaalota Phaawulos fi Xuqur Anbassaa joollee cibsineef dhoksaan kaffaltii raaw’ata. Qoricha bitaaf ture. Maallaqa qofaanii miti. Madoo sanniin irra deemee gaafatee jajjabeessa ture. Gaafa tokko nama rasaasaan qaama hormaataa cinaa rukutamee fincaan ofirraa baasuu hin dandeenyetu geeffame. Namni sun nama baadiyyaati. Naasuufi leeyya’uu irraa kan ka’e narsoota gargaarsifatuu rakkata ture. Kabiir kana argee gadi taa’ee ofumaaf gurbaa san gargaaraa ture jajjabeesse. Kabiir namooma akkanaa qaba ture.
Baruma qabsoo san Ameerikaa dhufee wal agarree turre. Osoman achi taa’uu gabaasni wahii natti dhufeen maxxanse. Qabeenya wahiitu gubatee ture. Namni maxxansa kiyya arge qabeenyi miidhame sun keessa kan Kabiir Huseen akka jiru naaf hime. Rifadheetin dhaqee dhiifama gaafachuuf itti hime. Kabiir Huseen waan jedhe beektuu “ Qabsoo Oromootif bu’aa buufnaan qabeenyaa mitii Qeerroon anaayyuu haa gubdu” jedhe garaa na raase. Kabiir Oromoo akkasii ture. Oromoo lafeen dhuka Oromummaatin guutame. Dureessa hojiin argatee, waan qabu sabarraa hin qusatin.
Kabiir Huseen Waaqoo akkanaanin beeka. Gootummaa, arjooma, namummaafi Oromummaa isaa anuu waan beeku hunda hin himne. Maalayyaa warri umrii isaa guutuu wal beekuufi waliin hojjate. Nama jaabaa dhabne. Gaaddisa guddaa tokkotu nurraa kufe. Galata ummata kanaaf ooltee jannataan qanani’i jennaan. Maatiifi hiryootaaf jajjabina hawwina. Ilmaan isaatiin waan inni huurkaa isaa xuruuree dhaabe kana, daran guddisaa, maqaa isaa bara baraan jiraachisaan dhaamsa kiyya. Sabnis isin cina jira.
Obbo Kabiir Huseen eenyu turan, sirna Awwaalchaa irratti maaltu jedhame?
(BBC Afaan Oromoo) — Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate.
Sirna awwaalcha abbaa qabeenyaa kanarratti Obbo Lammaa Magarsaa dabalatee aanga’oonni mootummaa fi namoonni bebbeekamoon biroo argamaniiru.
Obbo Kabiir eenyu turan?
Obbo Kabiir Huseen Godina Arsii aanaa Heexosaatti dhalatanii akka guddatan seenaan jireenyaa isaanii ni hima.
Hojii daldalaa har’a ittiin beekamtii guddaa horatan kanas tokko jedhanii kan jalqaban Hurutaatti koofiyyaa Musliimaa harkaan hojjetanii gurguruudhaan ture.
Hojii isaanii kanas dhawaataan guddisaa gara warshaa zayitaa, loon gabbisuu, Qonna babal’aa fi boodarras Hospitaala Jeneraalaa Adaamaa ijaaruudhaan indastirii fayyaa keessattis gurra guddaa nama horatani.
Itoophiyaafi Sudaan qaama daangaa biyyoota lamaanii sararu uuman
‘Wanti na himachiisu waan hin turreefan gadhiifame’
Kanaan alattis indastiriin qonna ammayyaa’aa irratti Godinoota Arsii fi Baalee keessatti lafa babal’aa tiraaktaraan qotuun omisha qonnaa gara biyya alaatti erguu irrattis daran beekamu.
Dhaabbilee gargaarsaa idil addunyaa gurguddoo kanneen akka World Food Program, Save the Children fi CRS fa’a ammoo warra Obbo Kabiir omisha qonnaa dhiheessafii turan akka ta’e galmeen seenaa isaanii ni mul’isa.
Goodayyaa suuraaKutaa ciisanii yaalamuu Hospitaala Jeneraalaa Adaamaa
Hospitaalli guddaan isaan Magaala Adaamaa kutaa magaala Boolee keessatti ijaarsisanis daran ammayyaa’aa fi yaala biyya alaatti ergamaa turan tokko tokko asumatti yaalaa akka argatan gochuunis hawaasa tajaajilaa jira.
Arjooma fi qabsoo
Obbo Kabiir qabsoo Oromoon bara jahatamoota keessa taasisaa ture keessatti gahee isaanii akka bahaa turan seenaan isaanii irratti ibsameera.
Keessumaa waldaa walgargaarsa Maccaa fi Tuulamaa keessatti hirmaannaa guddaa taasisaa turuutu himama.
Hojiilee daldalaa irratti muuxannoo guddaa qaban kanaanis dhaabbilee fi baankonni Oromoo yeroo hundeeffaman keessatti nama adda durummaan tumsaa turanidha.
Keessumaa hundeeffama baankilee akka baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, Baankii Intarnaashinaalii Oromiyaa fi baankii Awaash keessatti shoorri isaanii guddaa ta’uutu himame.
‘Hojii tola ooltummaa akka dirqamaatti hojjachuun murteesse’ – Obsee Luboo
Kanaan alatti qabeenya isaaniin namoota rakkatan gargaaruu fi qabsaa’otaa fi kanneen qabsoo keessatti miidhaman tumsaa akka turaniis sirna awwaalcha isaanii irratti himameera.
Obbo Kabiir Huseen amma duras yeroo adda addaatti dhukkubsatanii biyya keessaa fi alatti yaala argachaa turan.
Tibba darbe kanas torbeewwan muraasaaf Hospitaala isaaniitti ciisanii osoo yaalamaa jiranii Caamsaa 5, 2020 lubbuun isaani kan darbe.
Sirna awwaalchaa irratti maaltu jedhame?
Obbo Kabir Huseen sirni Awwaalcha isaanii magaala Adaamaatti raawwatame.
Sirna kana irrattis namootni beekamoo fi aanga’ootni mootummaa akka Obbo Lammaa Magarsaa, Obbo Shimallis Abdiisaa, Obbo Abbaaduulaa Gammadaa, Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Juneddii Saaddoo fi namoonni bebbeekamoo hedduun argamaniiru.
Goodayyaa suuraaHospitaala Jeneraalaa fi Koleejjii Meedikaalii Adaamaa
Sirna gageessaa isaanii istaadiyoomii Magaala Adaamaatti taasifame kanarratti namoonni haasaa taasisanis Obbo Kabiir qabsoo diinagdee taasifamuu qabu keessatti nama fakkeenyummaa guddaa qabanidha jedhan.
Sagantaa sirna awwaalchaa kanarratti namoota haasaa taasisan keessaa ministirri ittisaa Obbo Lammaa Magarsaa, Obbo Kabir itti dhiheenyaan akka beekaniifi quuqamni isaan saba isaaniif qaban, kutannoon dinagdee guddisuuf isaan qaban daran cimaadha jedhan.
“Nama sabaaf quuqamu, nama gootummaa qabu, Oromoof jedhee qabeenya isaa dhabeera ani ragaadha nan beeka” jedhan Obbo Lammaan.
Keessumaa addunyaa daldalaatiin alattis aantummaan sabaaf qabanii fi hariiroon isaan xiqqaa fi guddaa waliin obbolummaan jiraachuurratti qaban akka jajan himan.
“Warra mootummaati jedhee nu sodaatee hin beeku kana hin godhinaa, kana hojedhaa jedhee nama ija jabinaan namatti dubbatu” jedhan Obbo Lammaan.Dhaloonnis fakkeenyummaa isaanii faana dhahuudhaan imala isaanii kana itti fufsiisuu akka qabu dhaaman.
Pireezidantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaas Obbo Kabiir nama kana maaf hin hojjettan jedhe namatti dheekkamu ture jedhan.
“Nama Oromummaa gochaan jiraate, hojjetanii ofis sabas jijjiiruun akka danda’amu gochaan kan agarsiise” jedhan.
Obbo Jawaar Mohaammed ammoo tumsa isaan keessumaa yeroo qabsoon Oromiyaa keessatti finiinaa ture sana namoota miidhaan irra gahe gargaaruu irratti taasisan fakkeenyaan kaasanii leellisan.
Obbo Kabiir Huseen abbaa ijoollee dhiira 7 fi dubartoota 8 yoo ta’an umrii isaanii ganna 72’tti Addunyaa tanarraa du’aan boqotan.
HNN_NEWS: Haala Yeroo Irratti Marii Obbo Ibsaa Ahmed Ali Xasee fi Obbo Abdurashiid Abdurahaman HNN_NEWS:…